Adeegsiga Technorati's API iyo PHP | Martech Zone
Adeegsiga Technorati API iyo PHP
Sabti, Febraayo 24, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
WARSIDAHA: March 3, 2007 - La sii daayay Technorati Rank WordPress Plugin.
Cusboonaysiinta: Waa hagaagsan tahay in Technorati ay leedahay xad xaddidan weydiisasho maalinle ah. Waxaan ogaaday dariiqa adag, way i xidheen. Haddii aad rakibtay aaladda, waxaad arki doontaa inay ku qoran tahay Khalad la xiriir dib ugu noqoshada Mashruuca Mashruuca si aad u soo dejiso oo aad u martigeliso koodhka naftaada. Waxaan sidoo kale cusbooneysiiyay koodhka si marka aad u gaadho qoondada Maalinlaha ah API wicitaanada, waxay si fudud ugu beddeli doontaa isku-xidhka "Ku dar Faa'iidooyinka".
Inaan noqdo ganacsade keydka keydka macluumaadka, waxaan haystaa laba cilladood (waa hagaag… in kabadan labo, laakiin kuwani waa inay kudhacaan boostadan). Si fiican ayaan ula shaqeeyaa hadafyada tirooyinka waxaanan si fiican uga shaqeeyaa abaabulidda iyo si macquul ah isu waafajinaya mashaariicda, dadka, softiweerka, iwm. khayaal).
Ciladda tirada ayaa i sii eegaysa Technorati, Google Analytics, iyo Google Adsense maalintii oo dhan, maalin kasta. Techorati waa mid ka mid ah kuwa sida dhabta ah xiisaynaya maxaa yeelay waxay i siisaa cidda ila xiriirinaysa. Waxaan jeclahay inaan booqdo boggagaas oo aan arko waxa ay dhahayaan ama wixii ay faa iidada u heleen. Si loo aqoonsado inay darajadaydu is bedeshay iyo inkale, in kastoo, waxaan ubaahanahay inaan ku sameeyo baadi goob.
Waxaan u baahanahay wax ka dhakhso badan sidaa darteed waxaan u qorsheeyay xoogaa 'widget' teknoolojiyadda API si aan u helo darajadayda si dhakhso leh oo fudud. Xaqiiqdii waa waxa soo bandhigaya darajada sare ee qoraalkan. Haddii aad jeclaan laheyd inaad aragto sida, ku dhufo my bogga mashruuca ilaa.
Curling Laptops… iyo Beddelka kale
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 2: 06 AM
tan macnaheedu miyay tahay inaan noqdo kan ugu horeeya ee dhaha mahadsanid 🙂 waana ku ogeysiinayaa inaan xaqiiqdii amaahday tan borrow
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 8: 53 AM
Amaah iska tag, Steven! Taasi waa waxa uu blogkani ku saabsan yahay.
Feb 24, 2007 markay ahayd 1:25 PM
Waxaan sameeyay wax ka badal adeegsiga astaanta yar ee Technorati. Waxaa si fiican u qaabeeyey hadda. Sidoo kale waan cusboonaysiiyay bogga koodhka.
Feb 24, 2007 markay ahayd 1:29 PM
taabasho fiican 🙂
Waxaan u hayaa inay ku soo bandhigto wijigeyga qormada Boggeyga - oo leh qaddarin mudan dabcan 🙂
Feb 24, 2007 markay ahayd 1:38 PM
Wow, taasi waa sumcad weyn! Aad baad u mahadsantahay. Ha dareemin in lagugu qasbay inaad halkaa ku hayso. Waxaan ku leeyahay faallooyin yar HTML-ka oo tilmaamaya bogga mashruuca.
Feb 24, 2007 markay ahayd 2:45 PM
Waxaan hagaajiyay cabbirka qoraalka LOL sidaa darteed waxay u egtahay waxyar.
Feb 24, 2007 markay ahayd 6:43 PM
Waxaan ku cusbooneysiiyay wiishka qalab farsameysan oo fiican oo bixiya faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan darajadaada! Magacaaga Blog (sida ku cad Technorati) iyo sidoo kale xiriiriyeyaasha soo galaya iyo baloogyada!
Feb 24, 2007 markay ahayd 10:22 PM
Hagaag, taasi way deg degtay! Waxaan hadda khalad ka helayaa Technorati:
Waxaad isticmaashay qaybintaada maalinlaha ah ee Technorati weydiimaha API.
Aniga oo taas maskaxda ku haya, waxaan wax ka beddelay qoraalladayda halkan si dadku ugu martigeliyaan koodhka kaligood halkii ay ka garaaci lahaayeen boggeyga. Waan ka xumahay dadkaas! Xitaa ma aanan ogeyn inay jirto 'qoondeyn maalinle ah'.
Feb 24, 2007 markay ahayd 10:28 PM
si fiican in runtii nuugo Doug 🙂… oh si fiican u ahaa madadaalo intii ay socotey. In kasta oo ay soes tagto si ay u muujiso caan caan ah - malaha Technorati ayaa ogaan doonta oo hirgelin doonta wax la mid ah laftooda
Feb 24, 2007 markay ahayd 10:43 PM
Waxaan rajeynayaa sidaas, sidoo kale. Waxaan ka aqriyay boggooda mana heli karo waxa loo qoondeeyay maalin walba, in kastoo. Waa yara jahwareer.
Waxaan wax ka beddelay koodhka si aan si fudud ugu gudbiyo farriinta qaladka sida looga faallooday HTML si aysan u soo bandhigin "0" ay u isticmaali jirtay. Hadda waxay soo bandhigi doontaa qalabka kaliya haddii ay jirto jawaab togan.
Waxaan u maleynayaa in sharadka ugu fiican ay noqon karto inaad martigaliso bogga asalka naftaada waad sameyn kartaa taas. Waan kula soo socodsiin doonaa markaan ogaado waxa loo qoondeeyay maalin walba '. Mahadsanid, Steven!
Febraayo 26, 2007 saacadu markay tahay 12: 44 AM
Ok… xoogaa horumar ah. Haddii aad isku daydo inaad raadiso URL leh widget-ka oo aan ahayn kan, wuxuu kuu sheegayaa inuu qalad jiro oo wuxuu kuu keenayaa bogga mashruuca. Tani waa si aad u soo dejiso koodhka oo aad u martigeliso naftaada. Qof kastaa wuu martigelin karaa koodhkan sidaasna kuma geli doontid qaybinta maalinlaha ah ee API.
Waxaan sidoo kale wax ka badelay si haddii aad u gaarto Qoondada Maalinlaha ah, ay si fudud ugu beddesho xiriiriye "Ku dar kuwa aad jeceshahay"!
Febraayo 27, 2007 saacadu markay tahay 11: 44 AM
Waxaan la yaabanahay sida ragga Dapper ay u sameynayaan? Waxaa laga yaabaa inay kaliya eegaan hal mar maalintii oo ay keydiyaan natiijooyinka.
Dapper Screen Scray for Site kasta
Mar 3, 2007 at 6: 43 PM
Akhyaarey! Waxaan gebi ahaanba dib ugu qoray tan plugin WordPress ah waxayna leedahay keyd. Woohooo!
Technorati Darajayn WordPress Plugin
Mar 10, 2007 at 2: 56 PM
Waxaan ka helay aaladdaada yar ee Technorati, in kastoo aan ogaaday in adeegeygu uusan cURL la soo darin markii PHP5 la rakibay.
Marka waan arki doonaa haddii aan kan ku shaqeysan karo: http://samanathon.com/2007/03/10/wordpress-plugin-display-your-technorati-rank-with-php-4/ oo aad ka caawisay kuwa aan isticmaalin PHP5 🙂
Mar 10, 2007 at 5: 21 PM
Wow, Tyler! Waan ogaa in CURL ay tahay shuruud laakiin ma aanan ogeyn in dadka qaarkiis aysan heli doonin iyaga. Waxaan u maleynayay in taasi ay tahay maktabad ay si caadi ah u rakibeen rakibaadda PHP. Kaliya waan qiyaasayaa - laakiin waxaan sharad in Samanthon uu adeegsado cURL sidoo kale.
Sep 10, 2008 at 3: 44 AM
Mahadsanid badan! Tani waxay iga caawisay rarka.
Hadda waxaan u baahanahay oo kaliya inaan xoqdo waana inay ahaato mid qumman
Jul 17, 2009 markay ahayd 4:20 AM
Qofna wax fikrad ah kama haysto waa maxay xadka dhabta ahi? Waxaan hadda ogaaday jidka adag sidoo kale tijaabinta barnaamijka 🙁
Jul 17, 2009 markay ahayd 4:24 AM
Oh hada la ogaaday inay tahay 1000… oops, runtii ma waxaan sameeyay 1000 weydiimo maanta?
Jul 17, 2009 markay tahay 12:02 PM
guitarnoize - hubi inaad dhigato nooc ka mid ah farsamooyinka qafiska fudud